Battle Warship: Naval Empire 1.3.8.6 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.3.8.6 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Battle Warship: Naval Empire
Battle Warship: Naval Empire ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
2018 ၏ multiplayer စစ်ပွဲဂိမ်းကစားအပူဆုံးအခမဲ့ဤနေရာတွင်ပါ! ရေတပ်စစ်ဆင်ရေးရဲ့အကောင်းဆုံး 3D interactive မဟာဗျူဟာဂိမ်းထဲမှာဘယျသူမှမအောငျရေတပ်တစ်ခု Admiral ဖြစ်လာသည်။ သင့်ရဲ့ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ရန်နှင့်မရေမတွက်နိုင်သောမော်ကွန်းပင်လယ်တိုက်ပွဲများသို့သင့်ရဲ့အစွမ်းထက်ရေတပ်ဦးဆောင်လမ်းပြ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအတုလုပ်တဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခြင်းဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းကြီးထွားခြင်းနှင့်အတူတူတစ်ဦးအင်ပါယာကိုတည်ဆောက်စေ။ ပင်လယ်ဓားပြများ, ပင်လယ်မိကျောင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကစားသမားများဆန့်ကျင်လုပ်အားခစစ်ပွဲ! မိုဘိုင်း MMO အတွက်ယခုကမ္ဘာ့အလွှမ်းမိုးဘို့ Fighting!
သမုဒ္ဒရာတို့ကလွှမ်းနေတဲ့ Post-Apocalyptic ကမ္ဘာကြီး Enter နှင့်ပင်လယ်ဓားပြလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူအောင်မြင်။ အားလုံးထွက်ရေတပ်စစ်ဆင်ရေး၌သင်တို့၏ရန်သူများကိုဖျက်ဆီးဖို့အရှိဆုံးအထင်ကရတိုက်, ဖျက်သင်္ဘောများနှင့်လေယာဉ်များမှာထား၏! အဆိုပါဘာမြူဒါ - အဘယ်ကြောင့်အဆုံးစွန်ရေတပ်ထိပ်တိုက်တွေ့တှငျစစျမှနျသော MMO ဘုန်းအသရေနှင့်စစ်တိုက်ခြင်းငှါအနေနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းဘူး။ သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်ပါစေနေရာတိုင်းမှာပင်လယ်ဓားပြများနှင့်ပင်လယ်မိကျောင်းကိုလိုက်ရှာနိုင်! အမြင့်ဆုံးသောသမုဒ်တိုက်ယူသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏ကြောင့်မင်းလိုအပ်ပါတယ်!
ငါတို့သည်သင်တို့၏မဟာဗျူဟာသင့်ရဲ့ Armada သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အာဏာ၏အရွယ်အစားသလောက်အရေးပါဘယ်မှာစစ်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုခေတ်ထဲမှာရှိပါတယ်။ ဒီဂိမ်းကိုအကောင်းဆုံးရေတပ်တပ်မှူးဖြစ်လာရန်သင့်အားစိန်ခေါ်။ သင့်အနေဖြင့်အရေးယူစိုးမိုးနှင့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်ရေတပ်နှင့်အတူအမိန့်ကိုဆောင် ခဲ့. , ကင်းထောက်နှင့်ရန်သူသင်္ဘောများနစ်မြုပ်ဖို့စစ်မြေပြင်ပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်မျက်စိရှိရမည်!
ယခုပင်လယ်တိုက်ပွဲထုပ်ပိုးလုပ်ဆောင်ချက်သို့ထိုးဆင်း - ကမ္ဘာ့စစ်ကိုသာအစအဦးပါ!
Battle Warship: Naval Empire အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Battle Warship: Naval Empire အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Battle Warship: Naval Empire အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Battle Warship: Naval Empire အား အခ်က္ျပပါ
deadite စတိုး 1.37k 242.62k
Battle Warship: Naval Empire ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Battle Warship: Naval Empire အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.3.8.6
ထုတ်လုပ်သူ Stephen Curry
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://specialgamezpolicy.blogspot.hk/p/privacy-policy.html
File Size: 104.14MB
Release date: 2018-10-10 18:39:10
လက်မှတ် SHA1: AD:98:F3:79:35:13:BE:D1:3D:DC:4B:43:B0:02:63:C0:C7:7B:F2:BD
ထုတ်လုပ်သူ (CN): warships
အဖွဲ့အစည်း (O): fast
Battle Warship: Naval Empire APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ